म्हेन्दोमाया र नेपाली दुबै खालको गीत गाउछु : गायक हेम वाइवा - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
प्रकाशित मिति: २०७४, २ चैत्र शुक्रबार १८:३९
हाल सम्म थुप्रै गीत गाइसक्नु भएका गायक तथा संगीतकार हेम वाइवा अहिलेका बेस्त संगीतकर्मी हुनुहुन्छ। संगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा थुप्रै देश घुमिसक्नु भएका गायक वाइवा सँग गणेश मल्लले गर्नु भएको कुराकानी :
* नमस्कार सञ्चै हुन्हुन्छ ?
नमस्ते, सब ठिकै छु ।
* हिजो आज के म बेस्त हुन्हुन्छ ?
आफ्नो काम, गित कम्पोज, म्युजिकल प्रोग्रामहरु यस्तै यस्तै कुराहरुमा व्यस्त भईरहेको हुन्छु ।
* बिशेष गरेर तपाईंलाई म्हेन्दोमाया गायक भनेर चिनिन्छ, खास कुरा के हो ?
खास म शास्त्रीय संगीतको बिद्यार्थी हो । मैले नेपाली गीति एल्बम पनि निकालेको छु । त्यसै क्रममा तामाङहरुको मौलिक लोक भाकाहरु समिटिएको म्हेन्दोमाया भाकाको गीति एल्बम निकाल्दा यसैमा स्थापी भएको अनुभूति छ । त्यसैले होला म्हेन्दोमाया गायक भनेर चिनिएको ।
*अहिले सम्म कति गीत गाउनु भयो ?
हाल सम्म नेपाली र तामाङ गरेर १०० भन्दा बढी गितहरु गाएको छु ।
* नेपाली संगीत बजार कस्तो छ अहिले ?
मैले सुरुको दिनमा एल्बम निकलेको बेला भन्द अहिले यो क्षेत्रमा राम्रो छ ।
* संगीत बाहेक अरु कुनै व्यवसाय पनि गर्नु हुन्छ ?
गाउने र गित कम्पोज बाहेक पनि संगीत क्षेत्रमा नै काम गर्दै आएको छु । विभिन्न स्कूलहरुमा संगीत पढाउछु म ।
* संगीतमा लागेर कुनै पस्चताप छ कि छैन ?
मेरो SLC सकिने बितिकै २०५२ सालमा मैले संगीत बिषय लिएर ललित कला क्याम्पसमा भर्ना भएर पढेको हो । त्यति बेला ब्याचलर सकाएको थिए । त्यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु । खासै त्यस्तो पश्चाताप त लाग्दैन ।
* नेपाली संगीतको भबिस्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिलेको तुलनामा अहिले संगीत क्षेत्रको बजार फराकिलो हुँदै छ र यो क्षेत्रमा लागेकाहरुले सबैले त नभनुम धेरैले राम्रो आम्दानी गरिराको हुनाले पछि अझ राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने बिस्वास लाग्छ ।
* संगीतिक कार्यक्रमको दौरान कती देश पुग्नु भयो ?
गाउनकै लागि २०४५ सालमा युरोपको बुलगेरियामा सानैमा पुगेको थिए । त्यसपछि भारतको दर्जीलिङ र मिरिक, युएई, कतार, साईप्रस, कुवेत र दक्षिण कोरियामा पुगेर मैले प्रस्तुती राखेको छु ।
*बिदेशमा रहनु हुने नेपालीहरुले गीत संगीतलाई कस्तो रुपमा लिएको पाउनुहुन्छ ?
बिदेशमा नेपाली कलाकारहरुको प्रस्तुती हेर्न हाम्रै नेपाली दाजुभाई र दिदिबहिनिहरु नै आउने हुन र नेपालीहरुले नै हामिलाई निमन्त्रणा दिने हो । नेपाली गित संगीतलाई बिदेसका नेपालीहरुले अत्यन्त माया गरिदिनु भएकोले हामिलाई स्टेज पाएको हो । बिदेसमा नेपाली कलाकारहरुलाई निमन्त्रणा दिने कुनै बिदेसी नि हुन्न र हेर्न र गित सुन्न आउने कुनै बिदेसी नि हुन्न उहीँ नेपाली मात्र हो । उनै नेपालीहरुले आफ्नो बिदेसी साथिहरुलाई कोहि कसैले ल्याए मात्र हो ।तेसैले उहाहरुले धेरै माया गरेको पाउछु ।
* तपाईंको आगामी योजनाहरु के के छन ?
अहिले मेरो नेपाली गितहरु त्यति निस्केको छैन । अब चाहिँ नेपाली गितहरु पनि रेकर्ड गर्ने योजनामा छु ।
* यस क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पुस्तालाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यो क्षेत्रमा बहिर बाट हेर्दा सजिलो देखिन्छ । बस्तविकता फरक छ । संगीत सम्बन्धी राम्रो ज्ञान अनि अभ्यास र मिहिनेत गरेर मात्र आउनुस । राम्रो तयारिका साथ यस क्षेत्रमा आउनु भो भने सफता तपाईहरुको हात बाट धेरै टाढा हुने छैन । यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुलाई मेरो शुभकामना ।
* अन्तमा आफ्ना दर्सक स्रोताहरुलाई क् भन्न चाहनुहुन्छ ?
दर्शक श्रोता मेरा लागि भगवान हुन । दर्शक श्रोताले नै मलाई गायक र कलाकार बनाएको हो । तपाईहरुको माया ममता र सपोर्ट सधैं यसरी नै पाईरहने आशा अनि बिस्वास गरेको छु । मलाई यो ठाउ सम्म पुर्याईदिने तमाम श्रोता दर्शकलाई मुरि मुरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सधै आभारी रहने छु ।
-ग्लोबल संचार बाट
२०७४, २ चैत्र शुक्रबार १८:३९ मा प्रकाशित